आर्थिक – Namaste Host
June 7, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज प्रतितोला ?
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आज प्रतितोला ? काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार तोलामा ३ सयले घटेर ९३ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९३ हजार […]
June 5, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on फेरि बढ्यो इन्धनको भाउ, पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ
२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँले बृद्धि गरिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । मूल्यबृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १२५, डिजेल तथा मट्टितेलको १०८ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको मूल्य प्रतिलिटरमा ८० रुपैयाँ पुगेको निगमले जनाएको […]
तेलमा अस्वाभाविक मुत्य वृद्धि
June 5, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on तेलमा अस्वाभाविक मुत्य वृद्धि
उत्पादकले भान्सामा प्रयोग हुने तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म अध्ययन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा समेत चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि उद्योगसँग कागजात माग गरेर अध्ययन थालिएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणहित […]
May 28, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सुनको भाउ फेरि घट्यो
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको भाउ ओरालो लागेको छ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ४०० रुपैयाँ घटेको हो। योसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ९३ हजार ८०० रुपैयाँमा झरेको छ।हिजो बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ७०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोल फाइन गोल्ड ९४ हजार २०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९३ […]
May 28, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बुलेट बाईकमा आयो अति शानदार नयाँ मोडल, १ लाख २५ हजार ८२५ मात्र मुल्य
May 27, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं – बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । बुधबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य आज तोलामा ७ सय रुपैयाले बढेको हो । बुधबार तोलाको ९३ हजार ५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९४ हजार २ सय रुपैयामा कारोवार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी […]
हप्ताको पहिलो दिन नै बढ्यो सुनको मूल्य !
May 23, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on हप्ताको पहिलो दिन नै बढ्यो सुनको मूल्य !
काठमाडौँ – हप्ताको पहिलो दिन नै सुनको मूल्य बढेको छ। गत हप्ता लगातार बढेर अन्तिम दिन घटेको सुनको मूल्य आज बढेको हो।नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य ३ सय रुपैंयाँले बढेको छ। जससँगै छापावाला सुनको मूल्य ९३ हजार ६ सय कायम भएको छ। नेपाली बजारमा आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि […]
May 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ- नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबारको तुलनामा आज छापावाल सुन तोलामा १०० रूपैयाँले घटेर ९३ हजार ३०० रूपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजाबी सुन आज ९२ हजार ८०० रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज घटेको छ । चाँदी आज २० […]
May 17, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन अर्थात जेठ ३ गते सुनको मूल्य उकालो लागेको छ । सोमबार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सय रुपैयाँ वृद्धि भएको हो । आज सुनको भाउ बढेर ९२ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन ९२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार […]
May 14, 2021 May 14, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on के तपाई सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ आजको सुनको मूल्य
काठमाडौ । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मुल्य बढेको छ । बिहिबार घटेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा दुई सय रुपैयाँले बढेर ९१ हजार ६ सयमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै हिजो सुनको मूल्य तोलामा ९१ हजार चार सयमा कारोबार भएको थियो भने आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार एक […]